Anosizato Tratran’ny polisy ilay mpanolana vehivavy bevohoka
Dahalo any Betroka Miravaka odigasy sy karandoha
Dahalo miisa 14 mitam-basy no nanafika tao Maromandroso kaominina Isoanala distrikan’i Betroka ny sabotsy 5 oktobra 2019 lasa teo, araka ny tatitry ny zandarimariam-pirenena.
Tambajotrana mpangarom-paosy Voasambotra ireo vehivavy mpanafim-bola anaty kitapo-nono
Niakatra fampanoavana ny faran’ny herinandro teo ireo vehivavy roa tratra nangarom-paosy ny zoma teo, tany Arivonimamo.
Lasa faritra mena Isoraka Lasibatra ireo vazaha mivoaka alina
Miaina anaty tsy fandriampahalemana tanteraka ireo mponina eny Isoraka sy ny manodidina ankehitriny.
Monja Roindefo “Efa tena tsy rariny ny halatra omby any atsimo”
Nandefa taratasy miantefa mankany amin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny praiminisitra teo aloha Monja Roindefo Zafitsimivalo manoloana ny raharaha fanagiazana omby any Atsimo,
Tsy fandriampahalemana eny Avaradrano Namory ireo tompon’andraikitra ny depiote
Nirongatra ary niha nahazo vahana tato ho ato ny tsy fandriampahalemana tao amin’ny distrikan’Avaradrano.
Ben’ny tanàna maty voatifitra Voasambotra Rabiby lehiben’ny dahalo
Volana vitsy taty aoriana, nahitam-bokany ny hetsika fampandriana fahalemana nataon’ny teo anivon’ny zandarimaria.
Ela ny ela fa tratran’ny polisy ihany ilay jiolahy iray tamin’ny telo nanendaka mpivady handeha hody alina. Nodarohan’izy ireo ilay raim-pianakaviana ka rehefa tsy nahatsiaro tena dia nalefany tany anaty tatatra.
Ilay renim-pianakaviana nitondra vohoka roa volana kosa nentin’izy ireo tany amin’ny mangingina ary naolany ary mbola nalain’izy ireo koa ny firavaka sy ny vola tany amin’izy mivady. Nitory tany amin’ny polisy izy mivady ary nanao ny famotorana ny mpitandro ny filaminana. Fantatra ny toerana nipetrahan’ireto olon-dratsy ka nidina ifotony avy hatrany ny polisy saingy efa nitsoaka izy ireo. Nitohy ny fikarohana ary tra-tehaka teny am-pampiadiana akoho teny Anosizato ny iray. Niaiky ny heloka vitany ity jiolahy ity ary fantatra fa mpirahalahy avokoa izy ireo no nanao io asa ratsy io. Mitohy ny fanadihadiana.